Hi, mid ka mid ah qaar ka mid ah ayaa ii sheegi kara barnaamijka waxaan isticmaali ku cadaadisaa video ka cut final si aad tube xaddiga ugu badan ee suurtagal ah oo tayo leh? Tan waxa la ii arooska video demo, waxaan u baahan tahay waxa ay noqon in tayo fiican leh. Thanks.
YouTube waa ku weyn yahay, in aanay ahayn oo keliya waxay bixisaa lacagta badan ee la yaab leh videos si uu u daawado, laakiin sidoo kale waxa uu qof walba si ay u muujiyaan kartida iyo abuurka Naftooda. Si kastaba ha ahaatee, marka aad upoad video ah in YouTube, waxaa laga yaabaa inaad dareento inta badan ka careysan ay sabab u tahay xadka tirada video iyo dhererka, sida qofka kor. Dhab ahaantii, waxaad si fudud u xallin kartaa barnaamijka haddii aad u hesho muuqaal ah hawadda hufan ee YouTube sida Wondershare Video Converter dhow dahay. Sidaa daraadeed, aad awoodaan in ay ku cadaadisaa aad video files u YouTube ee fudud mouse click, oo waxaad ka samaysaa wax walba taam smart si loo gaaro natiijada ugu fiican. Waxaa xitaa kuu ogolaanaya in aad gacanta qabsato ka encoder, xallinta, heerka yara, heerka jir, iwm si aad u hesho tayada wax video in aad rabto. Akhriyey deg deg ah haatan.
Diyaarinta: Download iyo rakibi Wondershare maxkamad free Video Converter:
Fiiro gaar ah : Barnaamijkan waxa cross-madal, oo hoos ku hage qaadataa version Windows sida tusaale. Haddii aad socda Mac ah, waxaad dooran kartaa Wondershare Video Converter u Mac si isku mid ah loo gaaro.
1 shuban aad video
Daah barnaamijkan ka dib, si fudud u jiidi oo hoos u file video direclty xagga daaqaddii hoose. Dhammaan files keeno tusi doonaa sida thumbnails in saxaarad shayga. Barnaamijkan cadaadisaa doonaa videos in files cusub, sidaa darteed waxa aad dareemi kartaa xaqiijiyay in files asalka hayaa yihiin dhawrsan oo ammaan ah oo ka tirsan howlgalka aan habboonayn.
Talooyin: Waxaad ku dari kartaa dhowr files mar si loo badbaadiyo waqtiga u badan video riixo u YouTube.
2 Dooro "Tirada yar" furmo suuqa wax soo saarka
Si aad u cadaadin aad video for YouTube hab ka kaaftoomi-free ah, barnaamijkan bixisaa 3 fursadaha kartoo in aynu aad xulan ka direclty. Just raacaan hoos ku talaabooyin fudud:
Riix qaab icon iyo doortaan qaab video sida FLV, MP4, wmv, MOV, iwm sida wax soo saarka ah.
Markaas xagga midigta hoose ee suuqa kala aasaasiga ah, guji icon Settings ah.
In Settings suuqa kala pop-up ah, hubi "Size Small" doorasho, ka dibna ku dhuftay Waayahay.
Marka aad soo celiso in uu furmo suuqa hoose, hubi qiyaasay size file saarka ku cad hoos qaabka iyo sidoo kale riixi icon Play si ay u arkaan saameynta-waqtiga dhabta ah.
Fiiro gaar ah : Haddii weli size file wax soo saarka aan la aqbali karo, waxaad dooran kartaa inaad la qabsato koobin ee heerka yara, heerka jir, xallinta, encoder, iwm gacanta in ay sii cadaadisaa aad video for koombiyuutarka YouTube.
3 bilow compressing video for YouTube
Markii wax walba waa uu fiican yahay, ka dhacay Beddelaan si ay u bilaabaan video riixo u YouTube goobtii. Barnaamijkan waxa aad u hufan, oo waxaad heli doontaa files Tifaftirayaasha leh tayo wanaagsan oo aad ugu dhakhsaha badan u koombiyuutarka.
1. YouTube aqbali karo qaab sida FLV, wmv, MPEG4, MOV, AVI iyo MPEG, laakiin waxaa xaddidaya video dhererka wax ka badan 15 daqiiqo.
2. Si ay u sii yareeyo xajmiga file aad u geliyaan gal YouTube, waxa kale oo aad ka fiirsan kartaa qaar ka mid ah goynta qayb rabin ay ka mid ka shaqeynayaan falinjeeerka.
3. Hawadda video Tani loogu YouTube kale oo ay bixisaa YouTube qaybiyay saarka direclty. Si tan loo sameeyo, kaliya dooro "Qaabka"> "Web"> "YouTube Video" furmo suuqa wax soo saarka.
Isku day inaad video hawadda, waayo, YouTube lacag la'aan ah hadda.
> Resource > Video > Sidee ku cadaadisaa Video for YouTube